"Waxaan Uga Tagay Xilkii Aan Wasaarada Arimaha Gudaha Ka Hayey Inaan Taageero Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro"
Wednesday July 21, 2021 - 20:10:43 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Ayaan Axmed Baashe oo ka mid ahayd saraakiisha wasaarada arimaha gudaha somaliland ayaa shaacisay inay iskaga tagtay shaqadii ay dawlada ka haysay si ay ugu madax banaanaato taageero ay la garab istaagayso gudoomiyaha xisbiga Waddani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi.
Ayaan Axmed Baashe ayaa qoraal ay soo saartay ku shaacisay inay iskaga tagtay shaqadii ay guud ahaanba ka haysay wasaarada arimaha gudaha somaliland waxaanu qoraalkeedu u dhignaa sidan:-
Wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga qarranka, oon muddo dheer ka mid ahaa saraakisheeda waaxda maamuulka wasaarada Waxaan iskay uga tagay shaqada iyadoon layga eryin Maalina anshaxa lay marrin .
Ujeedayda ka tagiska shaqadaydu waxay ahayd laba arrimood Ninka Hanka madaxwayne leh inaan garabkiisa aan istaago, Ta labaad inaan fikirkayga sii xor ah uu cabiro oon laygu soo marmarsoon shaqaalaad tahay Warqada shaqo ka tagistayda inaan sii iskay ah uga tagay sii aan fikirkayga xor ugu ahaado .
Waxay taala xafiiska wasaarada arrimaha gudaha Iyo xafiiska shaqaalaha dawlada.
Guud ahaanba waxaan Banaanka ka istaagay Wadda shaqayantaa xukumadda Iyo Ururada qarranka .
Dhamaan laamaha dawlada oo xafiiskayaga Inta badan hoos iman jiray sida ciidamada Kala duwan Police ka , laanta socdaalka , Ilaalada xeebaha, Maayirada , badhaasabyada , xogyahayaasha
Degmoyinka gobolada sland.
Waxaan Halkan fariin uu marinayaa Xubnaha tirrada yar ee masiirka degankayga Ka arradan baahiyaha aasisaga ku doonayaa Agaasimayaal amma see qandaaras dawladeed Inaanan marnaba aqbali doonin inaad masiirkayaga ku shaqo doonataan Oo reerihina biil uga samaysaan.
Hadaan cid mushahar ku ixtiraamayo Anigu kaygi kama tageen Anagu agaasimayaal raadin mayno ,Qandaraas raadin mayno , Dhamaan shaqaale oo dhan raadin mayno Madaxwayne wax ka hooseeya dooni mayno.
Waxaan ku faraxsanahay guddi kaambaynka ee Heer gobolka maroodi jeex ee xisbiga waddani
Een ka mid ka ahaa inaad 80 cod naga hesheen Doorashadi hore.
Maanta 8 cod baa idin diyaara Haddi alle nagu simo inaanu gaadhno Waa inoo garoonka Al miidaanu waasic.
Ayaan A Bashe Nuuryey